ဖူးဖူး – Hlataw.com
မျက်လုံးကို စုံမှိတ်ခါ အကို့ အယက်ကို ခံပစ်နေသည် ..။ အကိုတိုးကြီး သည် တကယ် အယက်တော် သည် . .။ နောက်ကျရင် . .အကို့ကို … ဘာဂျာတိုးကြီး … လို့ စပြီးနောက်ပြီး .. ခေါ်ဦးမည် . .။ … အို . .အို့ . .ဟ…… မိုနာ ထွန့်ထွန့်လူး သွားရ သည် . .။ကိုတိုးကြီး ရဲ့ လျာကြီးရဲ့ ထိပ်က မိုနာ့ .. စောက်ပတ်အတွင်း ထဲကို အတင်းတိုးဝင်ပြီး မွှေနှောက် လာလို့ပါ . .။ … ကောင်းလားဟင်..မိုနာ . …. … အင်း..အင်း..ကောင်းတယ် . .သိပ်..သိပ်ကောင်းတယ် . …. အရမ်းကောင်းနေတုံး ဗြုံးကနဲ အကို ရပ်လိုက်သည် ..။ … ဟင်..ဘာ…ဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲ . …. ကောင်းနေဆဲ ရပ်လိုက်လို့ ဖီလင်ပျယ်သွားသည် ..။ ကိုတိုးကြီး သည် ဆိုဖါကြီးပေါ်က ဆင်းလိုက်သည်.. ။ ပက်လက်လေးလှဲနေတဲ့မိုနာ့ဘေးနားမှာ လာရပ်လိုက်ပြီး.. ကိုတိုးကြီး သည် ခါးက လုံချည်ကို ကွင်းလုံးပုံ ..ချွတ်ချပစ်လိုက် သည် . .။ ဟယ်တော့ . .မိုနာ..တုန်လှုပ်သွားသည် .. ။ ကိုတိုးကြီး ရဲ့ လီးတန်မဲမဲကြီးကို အနီးကပ် တွေ့မြင်လိုက်ရလို့ဘဲ . .။ ဒါ …ပထမဆုံး..အကို့ လီးကို တွေ့ဘူးရတာပါ . .။ တအိမ်ထဲ နိးနီးစပ်စပ် နေကြတော့ . .အကိုလီးတောင်တာကိုတော့ ခဏခဏ မြင်ဘူးခဲ့ သည် .. ။ လုံချည်ဝတ်ထားရက် လုံချည် အောက်က ထောင်ထတာကိုဘဲ .. မြင်ဘူးတာပါ . .။ … အကြီးကြီးဘဲ အကို . …. ကိုတိုးကြီး က သူ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီး ကို မိုနာ့ မျက်နှာနား တိုးကပ်ပေးလိုက် သည် ..။ မိုနာသည် အပြာဇာတ်ကားတွေကို နယ်စပ်မှာနေကထဲက ကြည့်ဘူးသူ ဖြစ် သည် . .။ အကို ဘာလို့ သူ့ လီးကြီးသူမပါးစပ်နား .. တိုးကပ်ပေးသလဲ.. ဆိုတာ.သဘောပေါက်ပါသည်. .။ အကို သည် မိုနာ့ ကို လီးစုတ်စေချင်လို့ ဆိုတာ သိသည် . .။ … တခါမှ စုတ်ဖူးဘူး . …. … စမ်းစုတ်ကြည့်မိုနာ . .အကို့ကို ကောင်းအောင် လုပ်ပေးချင်တယ်မှုတ်လားဟင် . …. မိုနာ ခေါင်းလေးညှိမ့်သည် ..။ … အင်း . …. မိုနာသည် ကိုတိုးကြီး ရဲ့ လီးကြီးကို လက်ကလေးနဲ့ မရဲတရဲ ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည် . .။ ပြီးတော့ ပါးစပ် နဲ့ ဖမ်းငုံလိုက် သည် . .။ ပူနွေးနေတဲ့ လီးကြီးရဲ့ ဒစ်လုံးကားကားကြီး ကို အသာ .. စုတ်ကြည့်လိုက် သည် . .။ … အိုး . .အင်း . .စုတ်..စုတ်. …. လီးကြီးထိပ် က လျံကျနေတဲ့ အရေကြည်တွေ က ငံကျိကျိ ..နဲ့ . ..။ ကိုတိုးကြီး က သူလိုချင်တဲ့ ပုံစံကို ပြောပြ သည် . .။
အရေတွေ စိုစိုရွှဲနေတဲ့ စောက်ပတ်ထဲ ဗျိကနဲ စွပ်မိသွား သည် ..။ အင်း . .နဲတဲ့ လီးကြီးမဟုတ်ဘူး ..။ ဒေါ်အယ်နာ..စွဲနေရပြီ . .။ ဆက်ပြီး ထိန်းပြီး ဖိချသည် . .။ တင်းကနဲ.. ထိထိမိမိကြီး လီးကြီးတဆုံးဝင်သွားသည် ..။ … အီး…ရှီး . .. … ဒေါ်အယ်နာ ..ဖင်ကို အသာပြန်ကြွပြီး အသာထိန်းကာ ပြန်ထိုင်ချသည် . .။ … အင်း . .ဟင်း. . ကောင်းလိုက်တာ ကွာ . …. လီးကြီး သည် စောက်ပတ်ထဲ အပြည့်အသိပ်ကြီး ကျပ်ကျပ်ကြီး ဖြစ်နေသည် . .။ ကိုတိုးကြီး လဲ ဒေါ်အယ်နာကို အောက်ကနေစပြီး ပင့်ပေးလာသည် . .။သူမ ဖင်ကြီးတွေ ကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး မလိုက် ဆွဲ ဖိလိုက် လုပ်ပေးသည် .. ။စောက်ပတ် နဲ့လီး ၀င်ထွက် ပွတ်တိုက်မှု က နှစ်ဦးစလုံးကို ကောင်းလွန်းစေတဲ့ ကာမအရသာတွေ ပေးနေပြီ ။ … ဘွတ် …ဘွပ်..ဘွတ်..ဘွပ် …..ဗျိ. . …. အရှိန်ရလာသည် ..။ ဒေါ်အယ်နာ တအား ဆောင့်နေပြီ ..။ အောက်ကလဲ ကိုတိုးကြီး က ပင့်လိုးပေးနေသည် .. ။ သည် အချိန်မှာ…ရေငတ်လို့ နိုးလာတဲ့ ဖူးဖူး သည် မီးဖိုထဲ ရေဆင်းသောက်တုံး မြေအောက်ခန်းထဲက တအင်းအင်း ..အသံတွေ နဲ့ ဖွတ်ဖပ် ဘွတ်ဘပ် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အသံတွေ ကြားလိုက်ရတာကြောင့် ကိုတိုးကြီး နဲ့ မိုနာတို့တော့ လိုးနေကြပြီ ဆိုပြီး … ချောင်းကြည့်လို တာကြောင့် လှေခါးက ခြေဖေါ့နင်းကာ …ဆင်းသွားလေ သည် ..။ သည် အချိန်မှာ လိုးနေကြသူ ဒေါ်အယ်နာ နဲ့ ကိုတိုးကြီးတို့မှာ ကာမ ဇောကပ်နေကြတဲ့ သူတွေမို့ .. ဖူးဖူး ဆင်းလာတာကို လုံးဝ သတိမထားမိဘဲ . .သူတို့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိဖို့ကိုဘဲ အာရုံထားနေကြသည် . .။ ဖူဖူးမှာ အမှောင်ထဲ မျက်စိ ကျင့်သားမရသေးလို့ ကုတင်ပေါ် လိုးနေကြတဲ့ သူတွေသာ ဘယ်သူဆိုတာ ပထမ သတိမထားမိသေးပါဘူး ..။ သူမ ထင်တာက မိုနာ နဲ့ကိုတိုးကြီး ဘဲ လို့ထင်နေသည် . .။ လိုးနေကြသူတွေ လဲတဖြေးဖြေးနဲ့ အရှိန်မြင့်လာကြသည် ..။ ကိုတိုးကြီး လဲ အောက်က နေရတာ အားမလိုအားမရ ဖြစ်လာ သည် .. ။ … အန်တီ. .ကျနော် အပေါ်က လိုးပေးတော့မယ် . …. လို့ ပြောလိုက်သည် .. ။ ချောင်းနေသော ဖူးဖူး လဲ ကိုတိုးကြီး စကားသံကြားလိုက်ရမှ မိုနာ မဟုတ်ဘဲ ဒေါ်အယ်နာ ဖြစ်နေတာကို သိလိုက်ပြီး အလွန်ဘဲ အံ့ သြသွားရလေ သည် .. ။ ကိုတိုးကြီး လဲဒေါ်အယ်နာ နဲ့ ပထမဆုံး စလိုးတုံးက ပြီးစလွယ်ဘဲ လှေကြီးထိုးပုံစံနဲ့ဘဲ အပြီး ..လိုးခဲ့ပေမဲ့..အခု ဒေါ်အယ်နာ ကို ဖင်ထောင်ခိုင်းပြီး လိုးချင်တာကြောင့် .. … အန်တီ..ဖင်ကုန်းပေးပါလား . …. လို့ ပြောလိုက်သည် ..။